Uhlobo lwetafile yoVavanyo lweTekhnoloji u-138 ikhutshwe | Ndisuka mac
Iphehlelelwe inguqulo 138 yoVavanyo lweTekhnoloji yeSafari
Enye inguqulelo yesikhangeli sokulinga sika-Apple ifikelela kubasebenzisi abafake kuyo kwi-Mac yabo.Uguqulelo olutsha olukhutshiweyo luyi-138 kwaye, njengeemeko ezininzi, lulungisa ezinye iimpazamo kwaye yongeza uphuculo oluqhelekileyo lokhuseleko abadla ngokulwenza. Olu guqulelo olutsha lwesikhangeli luza kwinyanga nje emva kokukhululwa kwenguqulo ye-137, i-Apple ngeli xesha iye yandisa ukukhululwa phakathi kweenguqulelo ngenxa yeeholide zeKrisimesi.
Itekhnoloji ye-Safari 138 isekwe kuhlaziyo olutsha lweSafari 15 ibandakanyiwe kwi-MacOS Monterey beta yamva nje, ke ibandakanya ezinye zeempawu zayo ezinje ngetab entsha eyenziwe lula kunye nenkxaso yamaqela eethebhu kunye nenkxaso ephuculweyo yolwandiso lwewebhu leSafari.
Olu hlaziyo lutsha luyafumaneka kweli candelo Uhlaziyo lweSoftware ngaphakathi kukhetho lweNkqubo, okoko nje ukhuphele ngaphambili uguqulelo lwesi sikhangeli sokulinga. Ukuze usebenzise esi sikhangeli, akukho mfuneko yokuba uneakhawunti yonjiniyela kwaye isebenza ngokwahlukeneyo kwaye ngokuzimeleyo ngohlobo lweSafari efakwe kwikhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » Iphehlelelwe inguqulo 138 yoVavanyo lweTekhnoloji yeSafari
I-WhatsApp yeMac iya kukuvumela ukuba unqumame kwaye uqalise kwakhona ukurekhoda ngelizwi